Coronavirus: Dalka keliya ee Yurub ee aan ka walwalsaneyn |
Qaaradda Yurub hadda waxay xudun u noqotay xanuunka corona, balse waxaa jira dal katirsan qaaradaas oo aan ka walwalsaneyn xanuunka faraha ba’an ku haya adduunka.
‘Waxba ha qalqalin!’
Balse gudaha dalkaas waxaa ka bilawday wacyigelin ku aadan xanuunka oo loo jeedinayo dadka, gaar ahaan dadka da’da ah.
“Saddex iyo ilaa afar qof ayaa maalinkiiba laga helaan xanuunka, waana la karantiilaa, laba asbuuc kadibna waa la fasaxaa,” ayuu yiri madaxweynaha.
Cudurka Corona Virus ayaa waxaa wali uu fara ba,an u ku hayaa 5 qaradood ee caalamka.
Xoghayaha guud Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaamay caabuqa Corona in uu yahay mid halis ku ah aadanaha, islamarkana ay tahay in bina’adamka dhammaan ay la dagaalamaan.
Antonio Guterres ayaa carabka ku adkeyay in jawaab uu bixiyo dalal gaar ah aysan ku filnayn la dagaalanka cudurka islamarkana ay muhim tahay in la isu garabsado.
Waxaa uu khudbad ka jeedinayay kulan xarigga looga jarayay lacag dhan balaayiin doolar oo loogu talagalay in lagu kaabo dalalka u nugul cudurkan, kuwaasi oo aan xitaa heli Karin adeega asaasiga ah ee caafimaadka.
Hay’adda caafimaadka aduunka ayaa dhankeeda sheegtay baahidda loo qabo in cudurkan baaritaankiisa iyo karantiilka dadka uu haleelo la sii xoojiyo.
Spain waxaa imika la diwaangaliyay islamarkana ay tirada dhimashada ka sare martay tiradii Shinaha ugu dhimatay caabuqan Corona.